Fantaro ny karatra KONRAD CREDIT BANK
Nekena tany amin'ny firenena 200 mahery, ny karatra Visa dia manolotra fomba azo antoka sy azo itokisana handoavana ny filanao na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao. Miaraka amin'ny karatra Visa anao dia afaka mahazo vola amin'ny vola 2 000 tapitrisa mahery manerantany.
Raha mikasa ny hanorina ny tantaran'ny trosanao ianao, dia mety ho karatra ho anao ireo. Aza mandoa vola isan-taona na mahazo tombony kely raha mbola mankafy ny fahafahanao miantsena ary manangona valisoa.
Ekena manerantany fa mety sy azo itokisana. Mety amin'ny fandaniana ny fianakaviana, fialantsasatra kely ary sakafo mahafinaritra.
Moa ve ny safidin'ny mpanjifa maniry bebe kokoa amin'ny carte de crédit azy ireo. Tsara ho an'ny fandraharahana sy ny fanapahan-kevitra lehibe.
Visa Tsy manam-petra
Karatra tsara izay manatsara ny filanao. Handresena ireo lalàna mandany. Aza mieritreritra intsony, manondrika ny tenanao amin'ny fahafinaretana tsy manam-petra.